တရုတ်အလီဘာဘာနက်ရှိုင်းသောအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | Inshare
ရှန်ကျန်း Inshare နည်းပညာ Co. , Ltd5နှစ်များအတွက်အလီဘာဘာစနစ်ကပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ယနေ့ဇွန်လ 11, 2019 ရက်နေ့တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံတစ်ဖန်အလီဘာဘာရဲ့ certified ရရှိထားပြီး service provider ကTÜV Rheinland ၏ on-site ကိုစစ်ဆေးခြင်းလိုက်ခြင်းသည်။ စက်ရုံ။
အဆိုပါကာလအတွင်းTÜV Rheinland, ပုဂ္ဂိုလ်များပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလက်မှတ်တစ်ဦးလက်မှတ် site တစ်ခုထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုလက်မှတ်ကောက်ယူနှင့် on-site နှင့်အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်ထုတ်ကုန်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူး။
ဒီစိစစ်အတည်ပြုမှတဆင့်ကျနော်တို့အပြည့်အဝကျွန်တော်တစ်ဦးအစွမ်းထက်သော e-စီးကရက်အရင်းအမြစ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုရှေးခယျြလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ကပိုပြီးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သငျနှငျ့အတူပူးပေါင်းလုပ်ဖို့မျှော်လင့်!
Post ကိုအချိန်: Jun-11-2019
ဖွင့်ပါ: 00:00 am မှာ - ပိတ်: 24:00 pm တွင်
ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ, 24/7 အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အချိန်မီ reply မထားဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်မခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
E-mail ကို: info@insharevape.com
E-mail ကို: ammy@insharevape.com
ဖုန်းနံပါတ်: 86 189 2847 0348
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. လမ်းညွှန် ,Hot ထုတ်ကုန်များ ,မြေပုံအညွှန်း ,amp မိုဘိုင်း
Gemini, Vape Pod Cartridge, Disposable Oil Cartridges, E-ဆေးလိပ် , တစ်ခါသုံး E ကိုဆေးလိပ် , Cbd Isolate 99,